६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न प्रभु लाइफलाई धितोपत्र बोर्डले दियो अनुमति
मंसिर १२, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आईपीओ विक्री गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले उक्त कम्पनीलाई रू. ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा विक्री गर्न मंसिर ११ गते अनुमति दिएको हो ।
उक्त कम्पनीले गत असोज १४ गते आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । हाल रू. १ अर्ब ४० करोड चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीको आईपीओ निष्कासन पश्चात चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पुग्नेछ ।
नयाँ बीमा कम्पनीको रुपमा विसं २०७४ साल मंसिर २८ गतेदेखि उक्त कम्पनीले औपचारिक रुपमा कारोबार शुरु गरेको हो । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको लागि तोकेको चुक्तापूँजी उक्त कम्पनीले आईपीओ विक्री पश्चात कायम गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उक्त कम्पनीले रू. ३ करोड ९ लाख २४ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो रकम गत वर्षको यस अवधिमा रू. १ करोड २२ लाख ९४ हजार थियो । नाफा वृद्धि गर्दै गएको कम्पनीले यस वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म रू. २५ करोड ९७ लाख ९१ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने रू. ६१ लाख ६८ हजार कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
हाल कम्पनीमा १ लाख २० हजार ४६९ बीमालेख कायम रहेको छ । यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्र कम्पनीले २२ हजार ५९४ बीमालेख कायम गरेको हो । यस अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. २३ करोड ९१ लाख ७९ हजार रहेको छ भने जीवन बीमा कोषमा रू. १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख ८५ हजार रहेको छ ।
बजाज अटो बन्यो विश्वको सर्वाधिक मूल्यवान दुईपांग्रे सवारी कम्पनी
काठमाडौं महानगरपालिका : चालू आवको ६ महीनामा ६९ पूर्वाधार सम्पन्न
लयमा फर्किंदै पोखराको पर्यटन